Fisolokiana, fivadiham-pitokisana : karohin’ny polisy fatratra i… Andoniaina | NewsMada
Fisolokiana, fivadiham-pitokisana : karohin’ny polisy fatratra i… Andoniaina
Par Taratra sur 26/10/2017
Niteraka resabe tany anaty tambajotran-tserasera sy tamin’ny haino aman-jery ny momba an’Andriamamonjisoa Andoniaina, 36 taona voalaza fa tsy hita nanomboka ny zoma 20 oktobra 2017 lasa teo. Karohin’ny polisy misahana ny ady heloka bevava (BC) sakelika fahatelo ity lehilahy ity noho ny fisolokiana vola antapitrisa maro sy fivadiham-pitokisana. Tsy mbola hita mihitsy ity lehilahy namoahan’ny polisy didy fikarohana ity. Mitohy ny fanadihadiana mahakasika ny tena marina amin’ity raharaha ity. Atao famotorana eny anivon’ny polisin’ny BC 3 amin’izao fotoana izao ny vadin’Andriamamonjisoa Andoniaina mba hahitana ny tena marina.
Tao amin’ny Lot AV 3 bis Ampitatafika Antananarivo ny nahitana azy farany ka izao tsy mbola hita izao.
Miangavy fiaraha-miasa amin’izay mety mahita na manam-baovao momba ity lehilahy ny eo anivon’ny polisin’ny BC mba hampilaza haingana azy ireo na koa hiantso ireo laharana telefaonina manaraka ireto : 034 05 526 94 / 034 05 517 26.
Nohamafisin’ny polisy hatrany fa melohin’ny lalàna ny firaisana tsikombakomba amin’ny olona namoahana didy fikarohana toy izao. Toy izany koa ny manafina na mampiantrano ireny olona karohin’ny polisy ireny.